Nawa amadivaysi ngamunye angasakaza iDisney + - ingeyakho ohlwini? - I-BGR - IT TEL RELAY
Accueil » UKUZIJABULISA Nawa amadivaysi ngamunye angasakaza iDisney + - ingeyakho ohlwini? - I-BGR
Kulolu Lwesibili Novemba 12, izigidi zabantu emhlabeni wonke bazi kahle ukuthi kungani lolu suku lukhethekile. Kulungile, namuhla usuku usuku lwe-Disney + lokwethulwa! Njengani nonke, silindele usuku lokukhululwa kwe-Disney + ngalokho okubukeka njengengunaphakade, futhi asikwazanga ukujabula lapha. Ngabe siyayithanda iNetflix? Impela. Ngabe sihlose ukuyihoxisa noma enye izinsiza zokusakaza esibhalisela zona? Ngokuqinisekile akunjalo, futhi lokho kungubuhle be-Disney + ... kuyabiza kakhulu kangangokuba akudingeki! Okwe-6,99 $ kuphela ngenyanga noma i-5,83 $ ngenyanga uma ukhokha unyaka nonyaka, unokufinyelela okungenamkhawulo kukhathalogi enkulu yokuqukethwe etholakala kusukela ngosuku lokuqalisa. Futhi uma sithi "lukhulu," sicabanga ngempela kanjalo - hlola ukumbozwa kwethu namuhla ukuze ubone uhlu olumangazayo lwayo yonke imibukiso ye-639 nama-movie atholakala kusukela namhlanje kwiDisney + .
Kuyamangaza ukuthi ama-7 amadola noma ngaphansi ngenyanga angakunikeza ukufinyelela kumashumi ezinkulungwane zamahora wokuqukethwe, futhi akusikho okuqukethwe noma okuqukethwe. Sikhuluma cishe ngayo yonke imovie iMarvel Cinematic Universe movie ngaphandle kwesihlanu, cishe wonke ama-movie ne-Disney movie, okuqukethwe kwe-National Geographic, zonke iziqephu ze-The Simpsons, yonke imovie ye-Pstrong, nokuningi. Ngaphezu kwakho konke lokhu, sinokuqukethwe okusha okukhethekile njengoku I-Mandalorian nezinye izinto eziningi ezisendleleni eya I-star wars indalo yamafilimu yaseMarvel, nokuningi. Kuyahlanya ... kepha ungakubuka kanjani futhi kuphi konke? Kulesi sihloko, sizobuyekeza wonke amadivayisi angaqhuba iDisney + ukubona ukuthi eyakho ifakiwe yini ohlwini.
"Ukwethulwa kwe-Disney + yisikhathi esiyingqophamlando inkampani yethu, esibonisa isikhathi esisha sokuqanjwa kwezinto ezintsha. nobuqambi, "kusho uBob Iger, oyi-CEO yeDisney, esitatimendeni. "I-Disney + inikela ngesipiliyoni sokuzijabulisa esiyingqayizivele ngokubonisa umtapo wethu we-Disney yangempela, i-Pstrong, iMarvel, i-Star Wars nama-movie we-National Geographic, imibukiso ye-TV nokuqukethwe okwangempela."
Ngempela, Bob, umlando, ake sixoxe ngokuthi wonke umuntu angakufinyelela kanjani konke lokhu okuqukethwe okuhle. Konke kuqala ngokuthi iwebhusayithi ye-Disney + okusobala ukuthi iyatholakala kunoma iyiphi ideskithophu yesimanje noma ikhompyutha ye-laptop enesiphequluli sewebhu. Amadivayisi eselula abuye akwazi ukufinyelela isiza, kepha ngeke uze ukwazi ukusakaza noma yikuphi okuqukethwe kwi-smartphone. Kungani ungakwenza, nokho? Uzothola isicelo esizinikezele I-Disney + iOS ye-iPhone ne-iPad esitolo se-Apple App kanye nohlelo lokusebenza I-Disney + Android ku-Google Play Isitolo. Ngakho-ke lokhu kufaka:
Impela, ama-movie nemibukiso ye-Disney kujatshulelwa kahle kusikrini esikhulu, futhi kunezindlela eziningi zokusakaza i-Disney + ku-TV yakho. Okokuqala, izinhlobo ezintathu zama-smart TVs zingasakaza iDisney + ngezinhlelo zazo zokusebenza. Azidingi isidlali semidiya sokusakaza:
Ama-LG TVs avela ku-2016 aneWebOS 3.0 noma kamuva
Ama-Samsung TVs avela kwi-2016 noma kamuva (ngokuxhaswa kwevidiyo ye-HD) esebenzisa uhlelo olusebenzayo lweTizen
Amanye ama-TV we-Android
Kuma-TV we-Android, nansi umbhalo wekhaya we-Disney + ochaza ukuthi imaphi amamodeli asekela iDisney +:
I-Disney + isekela i-Android TV kuhlu olubanzi lwama-TV namabhokisi ase-set-top. Abasebenzisi bangafaka uhlelo lokusebenza lwe-Disney + Android kusuka ku-Google Play Isitolo. Ngomuzwa omuhle kakhulu, sincoma uxhumano lwe-inthanethi lwejubane eliphezulu ne-Android OS 5.0 (Lollipop) noma ngokuhamba kwesikhathi.
Uhlelo lokusebenza lwe-Disney + Android lusekelwa kuma-TV e-Android ahambisanayo ahlukahlukene, kufaka phakathi i-Sharp AQUOS ne-Sony Bravia.
Uhlelo lokusebenza lwe-Disney + Android libuye lisekelwe kumabhokisi ahlukahlukene okusetha okusetshenziswa kwe-Android TV, kufaka phakathi i-NVIDIA SHIELD TV neMi Box. Ukuze ujabulele isipiliyoni sekhwalithi ephezulu kakhulu se-Disney +, zonke izinto ezibandakanya izintambo ze-HDMI, kufanele zisekele okuqukethwe kwedijithali ephezulu. Ukuboniswa kwangaphandle kumele kusekele i-HDCP 2.2 yokuqukethwe kwe-Ultra HD 4K nokuqukethwe kwe-HDR. Izingxenye zomsindo ezindala nezevidiyo zingaba nomthelela kwikhwalithi noma zivimbele ukudlala ngokuphelele.
Manje, uma ungeyena umnikazi wama-TV angenhla angenhla, noma uma ufana nathi futhi une-TV smart, Uma ungathanda ukusebenzisa isidlali semidiya sokusakaza, lawa wonke amadivayisi anezinhlelo zokusebenza ezinikezelwe i-Disney +:
I-Apple TV (uhlelo lokusebenza olunikezelwe ku-Apple TV 4th isizukulwane nangemva kwalokho)
I-Apple AirPlay (i-Apple TV esebenzisa i-tvOS 11 noma kamuva, Amathelevishini ahambisana ne-AirPlay 2)
I-Chromecast (i-1.36 firmware noma ngaphezulu)
I-Sony PlayStation 4
Zonke izisetshenziswa ze-Fire TV ne-TV Fire Edition zisekela uhlelo lokusebenza lwe-Disney +. Futhi njengoba amadivayisi weRoku ethandwa kangaka, ake sikhiphe wonke amamodeli ahambisanayo:
I-Roku Express +
I-4K Roku Premiere
I-4K Roku Premiere +
I-4K Roku Ultra
I-4K Roku Ultra LT
I-4K Roku Smart Somlomo
Umthombo Wezithombe: I-DAVIS ADAM / EPA-EFE / Shutterstock
Ngisanda kubuka isiqephu se-1 se- 'The Mandalorian' futhi ngokungathi sína, wow - BGR
I-Royal U-Turn: INkosana uCharles yahambisana kanjani nomthetho eyamvumela ukuthi ashade noCamilla